सांकेतिक मैनबत्ती र डा केसीसँग सम्झौतापत्र सांसदहरूलाई दिन संसद भवन मा जान खोज्दा समातियौँ | विवेकशील नेपाली अभियान
सत्यका लागि अहिले हामी प्रहरी हिरासतमा छौँ। सांकेतिक मैनबत्ती र डा केसीसँग सम्झौतापत्र सांसदहरूलाई दिन संसद भवन मा जान खोज्दा समातियौँ।
माफियामुखी ऐन फ़ेल बनाउनु हुन हरेक सांसदलाई अनुरोध ! हरेक नागरिकलाई अनुरोध !
सबैलाई भोली शनिवार १२ बजे माईतीघर देखि सदनसम्म नागरिक भेलामा जाऔँ! (काठमाडौँ बाहिर पनि चोकचोकमा भेला गरौँ)
फ़ोटो: महेन्द्र पुलिस क्लबभित्र
विवेकशील नेपाली अभियान: सांकेतिक मैनबत्ती र डा केसीसँग सम्झौतापत्र सांसदहरूलाई दिन संसद भवन मा जान खोज्दा समातियौँ